လက်စွပ်ကွင်း နက်ဗျူလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
M57၊ လက်စွပ်ကွင်း နက်ဗျူလာ (ဟာဘယ် အာကာသ တယ်လီစကုပ်)
18° 53′ 35.079″
7003256700000000000♠2567±115 ly (7002787000000000000♠787±35 pc)
လက်စွပ်ကွင်း နက်ဗျူလာ (Messier 57, M57 သို့မဟုတ် NGC 6720 ဟုလည်းသိထား) သည် လိုင်ရာ ကြယ်စုတန်းရှိ ဂြိုဟ်ဆိုင်ရာ နက်ဗျူလာတစ်ခုဖြစ်သည်။[C] ယင်းကဲ့သို့သော နက်ဗျူလာများသည် ကြယ်တစ်စင်း ကြယ်ဖြူပုအဖြစ်မရောက်ခင် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပြီး တောက်ပသော အိုင်ယွန်းနစ်ဓာတ်ငွေ့အမြောက်အများကို ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အာကာသထဲ့သို့ ထုတ်လွှတ်လေ့ရှိသည်။ နက်ဗျူလာအား ပြင်သစ် နက္ခတ္တပညာရှင် Charles Messier ဆိုသူမှ ၁၇၇၉ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမြေမှ ၀.၇၈၇ kpc (၂,၅၇၀ အလင်းနှစ်) ကွာဝေးသည်။
^ Specifically in the north of Lyra which makes it visible from everywhere above about the en:47th parallel south. However the Sun passes through Sagittarius far to the south (or technically the Earth orbits so as to make the Sun seem to do so) throughout December. This also makes the cluster mostly risen during day, not night, in the nearest months but will never impede pre-dawn and post-sunset views from the upper half of northerly latitudes.
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ M 57။ SIMBAD။ Centre de données astronomiques de Strasbourg။
↑ Murdin, P. (2000)။ "Ring Nebula (M57, NGC 6720)"။ in Paul Murdin (ed.)။ Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics။ Institute of Physics Publishing။ Bibcode:2000eaa..bookE5323.။ doi:10.1888/0333750888/5323။ ISBN 978-0-333-75088-9။ Article ID #5323။
↑ O'Dell, C. R. (2002). "Knots in Nearby Planetary Nebulae". Astronomical Journal 123 (6): 3329–3347. doi:10.1086/340726. Bibcode: 2002AJ....123.3329O.
↑ Coe၊ Steven R. (2007)။ Nebulae and how to observe them။ Astronomers' observing guides။ Springer။ p. 111။ ISBN 978-1-84628-482-3။
Wikimedia Commons တွင် Ring Nebula နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
M57 Archived 13 March 2007 at the Wayback Machine. ESA/Hubble
Szymanek, Nik။ M57 – Ring Nebula။ Deep Sky Videos။ Brady Haran။
ကိုဩဒိနိတ်: 18h 53m 35.079s, +33° 01′ 45.03″
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်စွပ်ကွင်း_နက်ဗျူလာ&oldid=727450" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၂:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။